၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် မာချူးပီချူးကို ပီရူးသမိုင်းဝင်ဘေးမဲ့တောအဖြစ် ကြေညာခဲ့ပြီး ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အင်တာနက်မဲပေးမှုအရ မာချူးပီချူးကို ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Wright Paleohydrological Institute Archived 31 August 2010 at the Wayback Machine. with reports on water management at Machu Picchu
မာချူးပီချူးဓာတ်ပုံများ Archived 14 February 2012 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မာချူးပီချူး&oldid=727392" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။